အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့်။ ( Renew ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့်။ ( Renew )
အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့်။ ( Renew )
Posted by ခင်ခ on Oct 28, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes | 19 comments
” အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှု့ထောင့်။ ( Renew )”
” အရက်တွေ သောက်လာပြန်ပြီလား “
” ဘော်ဒါတွေဆုံလို့ နည်းနည်းပါးပါး ပါ “
” အဲဒီနည်းနည်းပါးပါးကနေ နောက်တော့ များများစားစား ပြီးတော့ ယစ်ထုပ်ဖြစ်ရောနော် “
” အဲလိုတော့ မဖြစ်ပါဘူး မိန်းမရာ အရက်ဆိုတာ စနစ်တကျ သောက်တတ်ရင် ဘေးမတွေ့ဘဲ ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် တောင် ဖြစ်သေးတယ်တဲ့ “
” အရက်ဘဲ စနစ်တကျသောက်ဖို့ ရှိသေးတယ် ဟုတ်လား အပိုတွေ သောက်ချင်လို့ ရမယ်ရှာပြောတတ်တယ်”
” အဲဒါဆိုလည်း ဒီမှာဖြတ်ကြည့် တကယ်ပြောတာ အရက်ကိုဘယ်လိုသောက်ရမလဲ ညွှန်းထားတယ် “
” ပေးဖတ်ကြည့်အုံးမှဘဲ “
” အရက်မသောက်ဘဲ မနေဖြစ်သေးလို့ အရက်သောက်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်ကနေ ဘယ်လိုပုံစံ သောက်သင့်သလဲ ဆိုတာလေးကို ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေတွေထဲက မျှဝေရေးပေးလိုက်မယ်နော်။
ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ ကရင်အဖိုးတစ်ယောက်ရှိတယ် သူကညနေထမင်းမစားမီ ပုံမှန်အရက်ကလေး ၂-၃ ပက် လောက်သောက်ပြီးမှ ထမင်းစားလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒါကို အသက်၂၀ခန့်အရွယ်လောက်ကထဲက ပြုမူသောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စကားစပ်မိတော့သိရတယ် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူအရွယ်က၇၆ လောက်ဖြစ်နေပြီ၊ သူကိုအရက်သမားလို့ပြောရအောင်လည်း နံနက်ပိုင်း၊ နေ့လယ်ချိန်များ၌ သူလုံးဝမသောက် သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ၀ါးကပ်ယက်တဲ့ အလုပ်ကိုသာလုပ်နေသည်၊ ညနေထမင်းမစားမီတွင် သူသောက်သော်လည်း ၂-၃ ပက်ထက် ပိုမသောက်၊ ပြီးလျှင်ထမင်းအ၀စားတတ်တယ်၊ အရက်မသောက်ဘူးလားဆိုတော့ သောက်တယ်၊ အရက် သမားလားဆိုတော့လည်း မူးပြီးအော်ဟစ်နေတာမျိုး၊ တွဲခေါ်ရတာမျိုး တစ်ခါမှမတွေဘူးဘူး၊ ညနေအလုပ်သိမ်း ပြီးပြီဆို ပုလင်းလေနဲ့ သွားဝယ်ပြီးသောက်တာဘဲလေ။ တစ်ခါကလည်း ရန်ကုန်က ဦးလေးဆရာဝန်ဆေးခန်း ကိုအသက် ၇၀ကျော် တပ်မတော်အငြိမ်းစား အရာရှိကြီးတစ်ဦး အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေက ဖြောင်းဖျမှုကြောင့် တပ်ထဲစစ်မှုထမ်းဘ၀ ကထဲက ညနေထမင်းမစားမှီ ၀ီစကီလေး ၃-၄ ပက်သောက်ခဲ့တာကို ဖြတ်လိုက်တော့ ထုံသလို၊ကျဉ်သလို ဝေဒနာရလို့ လာပြဖူးတာ တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်၊ ဦးလေးကဆန်းစစ်ကြည့် တော့ သွေးတိုး၊ ဆီးချိုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လည်ပင်ကြီးပေါင်းတက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာကိုသွားတွေ့တယ်၊ ဒါနဲ့ အကြော ပြင်ခြင်း၊ တိုင်ရင်းဆေးအုံခြင်း၊ ကြပ်ထိုးခြင်းတို့နှင့် ကုသရန်လမ်းညွှန်ပေးခဲ့သလို အရင်ကထဲက ရင်းနှီတဲ့ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နေတော့ သူသောက်နေကြ ညနေထမင်းမစားမီဝီစကီကို ပြန်သောက်ဖို့ တိုက်တွန်း ခဲ့တယ်၊ ဦးလေးကအဲလိုတိုက်တွန်းတော့ သူ့မှာဝမ်းသာမဆုံးတဲ့ပျော်ရွင်မှုမျိုး တွေ့လိုက်ရတယ်၊ ဆေးခန်းက သူထွက်သွား တော့ ကျွန်တော်က ဦးလေးကိုမေးကြည့်တယ် ဘာလို့ဝီစကီကို ဆက်ပြီးမဖြတ်ခိုင်းဘဲ ဆက်သောက်ဖို့ပြော တာလဲ လို့လေ၊ ဦီးလေးဆရာဝန်ကဖြေတာ ရှေးတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးများ ပြောလေ့ ရှိတဲ့ စကားရှိတယ် “ မူလ ဓာတ်ဟောင်း မဖျက်ကောင်း´´ မို့ပေါ့လေ၊ လူများတွင် ကျင်လည်ခဲ့ရသောဘ၀၊ အနေအထား ပတ်ဝန်းကျင် ပေါ်မူတည်၍ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် ဓလေ့များ ကွဲပြားတတ်တယ်၊ ထိုအနေအထားကို အသက်အရွယ် အလွန်ကြီးမှ သွားဖျက်ပြီးပြောင်းခိုင်းရင် အကျိုးဖြစ်မှုထက် ဘေးဖြစ်မှုက ပိုနိုင်လို့ဘဲတဲ့။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာ ကျန်းမာရေးရှု့ထောင်ကပြောတာပါ ဘာသာရေးရှု့ ထောင့်အရ တော့ လွဲချင်လွဲမပေါ့။ အဲဒီတော့ မိအိုဖအို၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို သူတို့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန်တို ကာလ လေးကိုဖြတ်ကျော်လို့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု့ပေးရာ၌ တင်းကျပ်တဲ့ ကန့်သတ်မှုများမပေးဘဲ စိတ်ချမ်း သာမှုကို ဦးစားပေး သင့်ကြောင်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရက်မသောက်ဖို့တိုက်တွန်းမှု့မှာ သူ့ဓလေ့၊ ခံနိုင်မှုအရွယ်၊ ကာယကံရှင်ရဲ့ဆန္ဒတွေပါ စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့က အရက်၊ ဘီယာ မသောက်ဖူးဝိုင်သောက်ကြတယ်၊ ၀ိုင်အနီသောက်ရင် နှလုံးအတွက် အကျိုးရှိတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း သောက်ကြတာပါသလို၊ အမျိုးသမီးများလည်း သောက်သုံးကြတာတွေ့ရတယ်၊ ၀ိုင်အနီမှာ ရက်စ်ဗာရာထရော ( Resveratrol ) ၊ ပေါ်လီဖီနော (Poly Phenol ) ၊နဲ့ ဖလေဗိုနွိုက် ( Flavonoid ) စတဲ့ အားကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပြုကာပစ္စည်း Antioxident အများအပြား ပါရှိလို့ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ မဖြစ်ပွား အောင်ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၀ိုင်အနီမှာ အရက်ပျံပါရှိသေးတဲ့အတွက် ကာလ ကြာရှည်စွာ ပမာဏများများ သောက်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကြိမ်တည်း လွန်လွန်ကဲကဲ သောက်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်၊ အမျိုးသားများအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို ၀ိုင်အနီ ၂၅၀ စီစီထက် ပိုမသောက်သင့်သလို၊ အမျိုးသမီးများ အနေနဲ့တော့ တစ်ရက်ကို ၁၂၅ စီစီထက် ပိုမသောက်သင့်ပါ၊ အကြောင်းကတော့ ကိုယ်တွင်းမှာ အရက်ပျံရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို လှုံ့ဆော်အားပေးနိုင်တဲ့ အယ်လကိုဟော ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်နေ့ ( Alcohol Dehydrogenase ) ဟာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်ဝက်သာရှိတတ် လို့ပါဘဲ၊ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ၀ိုင်အနီကို ဒီပမာဏတွေထက်ပိုသောက်ရင် နှလုံးသွေးကြောရောဂါရဲ့ ဖြစ်ပွားနှုန်း ကိုမလျောစေတဲ့အပြင် ပိုလို့တောင်တိုးနိုင်သလို အရက်ပြန်ဓာတ်မတည့်သူတွေ၊ အစာခြေလမ်းကြောင်းမှာ အနာရှိသူတွေ၊ အသည်းခြောက်သူတွေ နဲ့ အာရုံကြောစနစ်မှာ ရောဂါရှိသူတွေမှာ ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။
အရက်လို့ဆိုရင် Alcohol ပါဝင်မှုပမာဏ အနည်းအများသာကွာခြားပေမယ့် အရက်၊ ထန်းရည် ၊ ဘီယာ၊ ၀ီစကီ၊ ဂျင် ၊ ၀ိုင် ၊ ရမ် ၊ အရက်ဖြူ၊ တောအရက်၊ ချက်အရက် အားလုံးပါပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဆို Spieits ဆိုတာ ၀ီစကီ၊ ရမ် စတဲ့အရက်ပြင်းကိုခေါ်ပြီး ဘီယာတို့ ၀ိုင်တို့ကတော Spieits အုပ်စုထဲမပါပေမယ့် Alcohol ပါဝင်တဲ့အတွက် အပျော့စားအရက်လို့ခေါ်ရမပေါ့ဗျာ။ အပြင်းအပျော့ အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊ ထန်းရည် ဘယ်အ ရာမဆို လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာရင် ပထမဆုံး အစာအိမ်က နေပြီးခြေဖျက်ပစ်တယ်၊ အဲဒီမှာ အစာ(အမြည်း)နဲ့ တွဲရင် အစာအိမ်ကချေဖျက်တဲ့အခါ အစာအိမ်နာခြင်းသက်သာပေမယ့် အစာမပါရင် အစာအိမ်နရံထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပြီး ရေရှည်မှာမကောင်းတဲ့ သဘောဖြစ်စေမယ်၊ အဲဒီလို အစာအိမ်က ခြေဖျက်ပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းကို သွေးကြောကတဆင့် အသည်းကိုရောက်တယ်၊ အသည်းက ထက်ချေဖျက်တယ်၊အဲလိုခြေဖျက်ဖို့မနိုင်ရင် အသည်းကိုထိခိုက်တာပါဘဲ၊ ခြေဖျက်တယ်ဆိုတာ အရက်ကို Alcohol ကနေ ဒီအပြင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်း အသွင်ပြောင်းတွေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပစ်တာ၊ ၀င်လာသမျှအရက်ကို အစာအိမ်နဲ့ အသည်းကခြေဖျက် တဲ့ဒဏ်ကို အသည်းကထိခိုက်ခံရတယ်၊နေ့စဉ်ရက်ဆက်နဲ့ အလွန်အကျွံသောက်တဲ့သူတွေမှာ ပထမဆုံး စဖြစ်စေတာက အသည်းအဆီဖုံးတဲ့အဆင့်ပါဘဲ၊ Fatty Liver အသည်းအဆီဖုံးတဲ့ အဆင့်ကနေ မရပ်မနား ဆက်သောက်နေမယ်ဆိုရင် Alcoholic Hepatitis အသည်းရောင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်၊ အဲဒီကမှ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ အသည်းခြောက်တဲ့ Alcoholic Cirrhosis အရက်ကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်း ဖြစ်စေတာပါဘဲလေ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် လက္ခဏာအနေနဲ့ ဗိုက်ညာဘက်တခြမ်းမှာ ထောက်နေမယ်၊ ဆရာဝန်သွားပြလို့စမ်းရင် အသည်းကြီးနေမယ်၊ လုံချည်၊ ဘောင်းဘီဝတ်ရင် တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေမယ်၊ ဒါလည်းနေလို့ရတာဘဲဆိုပြီး ဆက်သောက်နေရင် အသည်းစရောင်လာမယ်၊ နောက်မျက်လုံးတွေ ၀ါချင် လာမယ်၊ ဆီးသွားရင် အမြဲဝါလာမယ်၊နောက်ပိုင်း အစားအသောက်ပျက်လာပြီး အစာစားချင်စိတ်လျော့ လာမယ်၊ နုံးလာပြီး လှဲနေချင်သလိုဖြစ်လာရင်တော့ အသည်းရောင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီပေါ့၊ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးကတော့ အသည်းခြောက်ရောဂါဖြစ်တာပါဘဲဗျာ။
အဲဒီတော့ အရက်မပြတ်သေးလို့ သောက်ဖြစ်ကြအုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်ပေးပါအုံးနော်။
ဗိုက်ထဲအစာမခံဘဲ အရက်မသောက်ပါနဲ့။ အရက်မသောက်မီ အစာ စားပေးပါ။
အရက်ကို အမြည်း(ဟင်း)၊ အစာ စားရင်း အရက်သောက်ပါ၊ အလွတ်မသောက်ပါနဲ့။
အရက်ပြင်းကို ရေ(သို့)ဆိုဒါရည်(သို့)အချိုရည် တစ်ခုခုနဲ့ ရောစပ်ပြီးသောက်ပါ။
အရက်ကို အလွန်အကျွံ(ခံနိုင်ရည်ရှိမှုထက်ပိုအောင်) မသောက်ပါနဲ့။
အဲဒီလို စည်းစနစ်လေးနဲ့တော့သောက်စေချင်ပါတယ်၊ အရက်ကို ကာလကြာရှည် သောက်သုံးခဲ့ရင် အသည်းမှာ အဆီတည်တတ်ကြောင်း အားလုံးသိလောက်မှာပါ၊ အရက်သောက်တဲ့အခါမှာ သကြားဓာတ်ကို လုံလောက်စွာ ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရင် အရက်ကြောင့် အသည်းအဆီတည်တဲ့အဖြစ် လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်းကို သုတေသနစစ်တမ်းအရ သိရှိရပါတယ်၊ ပြီးတော့ အစားအသောက်မှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်မှုနည်းနေရင် တိုးများစေနိုင်ကြောင်း၊ ဒီအောက်ဆီဒေ့အင်ဇိုင်းရဲ့ တိုးများမှု့ဟာ အသည်းမှာ အဆီတည်ရမှုနဲ့ ပက်သက် ဆက်စပ်နေကြောင်း ညွှန်းဆိုထားပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အရက်သောက်ပြီးတာနဲ့ ထမင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်ပြည့် စေမယ်အစားအသောက်တစ်ခုခုဘဲဖြစ်ဖြစ် မဖြစ်မနေစားပေးသင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတရံ အလွန်အမင်းသောက်မိလိုက်လို့ အမူးလွန်သွားတဲ့အခါမှာ ပြုလုပ်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့်လေး တစ်ခုပြုတတ်ကြတာ အတော်များများရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ အရမ်းမူးသွားရင် အိပ်ပစ်လိုက်ကြတာဘဲလေ။ ဒါဟာမှားတဲ့လုပ်ဆောင်နည်းလို့ ပြော၍မရပေမယ့် အမူးလွန်တာကိုဖြေလျှော့မှုတစ်ခုခုလုပ်ပြီးမှ အိပ်ခြင်းဟာ ပိုကောင်းပါတယ်လို့ သုတေသီတို့ကဆိုထားပါတယ်၊ တစ်ခါတရံကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွဲတွေမှာ တွေ့ဖူးပါလိမ့် မယ်ထင်ပါတယ်၊ အရက်သောက်လာလို့ မူးလာတဲ့သူကို ပျားရည်လေးသောက်ဖို့ ပေးတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ အဲဒီသုတေသီတို့ရဲ့ အကြံပြုချက်ကိုပြသတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အရက်အသောက်များသွားလို့ အမူးအရမ်း လွန်တဲ့အခါ မအိပ်ခင် အမူးပြေစေတဲ့ အရည်တစ်ခုခုသောက်ပေးသင့်ပါတယ်၊ အလွယ်ကူဆုံး အရက်မူးပြေစေ နိုင်တဲ့ဖျော်ရည်လေးတွေကို ကောက်နုတ်မျှဝေရေးပေးပါမယ့်။
ရေကျက်အေး ၂၀၀ စီစီ ( ရေဖန်ခွက်တစ်ခွက်ခန့်)
ပြုလုပ်နည်း- ခရမ်းချဉ်သီးကို အတုံးလေးတွေတုံးပြီး သစ်သီးဖျော်စက်ထဲ ထည့်ပါ။ပြီးရင် ရေကျက်အေး လောင်းထည့်ပြီး ညက်ညက်မွှေကာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
အကျိုး – ခရမ်းချဉ်သီးရည်ဟာ အရက်ပြန်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို သွက်စေပြီး၊ အရက်မူးလို့ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မအီမသာလက္ခဏာကို သက်သာစေပါတယ်။
၂ ။ ကြံ နဲ့ ပူစီနာ ဖော်ရည်
ကြံရည် – ၁ ခွက်
ပြုလုပ်နည်း – ကြံရည်ထဲ ပူစီနာရွက် သို့မဟုတ် ပူစီနာအရည် ထဲ့ပြီး သမအောင်မွှေလို့ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်၊
အကျိုး – ကြံရည်ဟာ ကိုယ်တွင်းအပူအပုပ်စင်စေတယ်၊ ရေငတ်သက်သာစေတယ်၊ အရက်မူးပြေလျှော့စေ တယ်၊ ပူစီနာကလည်း အရက်မူးပြေအားကောင်းပါတယ်။
၃။ ပျားရည် ရှိရင်တော့ ရေတစ်ခွက်ထဲ ပျားရည်တစ်ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း )ထဲ့မွှေပြီး သောက်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဗီတာမင်စီဆေးပြားနှင့်ရေ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အခုလွယ်ကူတဲ့နည်းတွေထဲက မိမိအတွက် အဆင်သင့်နိုင်တဲ့နည်းဖြင့် သောက်သုံးပြီးမှ အိပ်စက်ခြင်းပြုသင့် ပါတယ်။
တစ်ခါတရံ ညနေ သို့မဟုတ် ညပိုင်း အရက်သောက်များသွားလို့ မနက်အိပ်ယာနိုးထတဲ့အခါမှ လန်းဆန်း မှု့လျှော့ နည်းကြတာလည်းရှိတတ်တယ်၊ ဒါကိုအရက်နာကျတယ်လို့ ခေါ်ကြလေ့ရှိပါတယ်၊ အရက်နာကျရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှု့ကြောင့်ပါဘဲ၊ အရက်ဟာ ဆီးရွှင်စေပါတယ်၊ ဘီယာဆို ပိုလို့ ဆီးရွှင်စေပါတယ်၊ ဆီးထဲမှာ အရည်အတော်တော်များများပါသွားတာကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ချာချာလည် မူဝေခြင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေကို ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဝေဒနာပြင်းထန်မှု့ဟာ အရက်အမျိုးအစားနဲ့ သောက်သုံးခဲ့တဲ့ ပမာဏပေါ်မူတည်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အရက်သောက်ပြီး တရေးနိုးတဲ့ အခါမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မနက်နိုးထတဲ့အခါမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရေ သို့မဟုတ် အရည်များများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်၊ ဌက်ပျောသီးစားခြင်းကလည်း သက်သာစေပါတယ်၊ တစ်ချို့က ဘလက်ကော်ဖီသောက်တယ်၊ အဲဒီအစဉ် အလာ ကမှားယွင်းပါတယ်၊ ဘာဖြစ်ဘို့လဲဆိုတော့ ကော်ဖီဟာဆီးရွှင်စေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရေဓာတ် ကိုလျော့နည်းစေပြီး၊ ကဖိန်းဓာတ်ဟာ နှိုးဆွပစ္စည်းဖြစ်တာမို့ ကတုန်ကရင်ဖြစ်ခြင်းကိုပိုပြီး ဆိုးဝါးစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်စီပါဝင်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေ၊ သကြားဓာတ်ပါတဲ့ သစ်သီးဖော်ရည်တွေ သောက်တာပို အကျိုး ရှိပါတယ်။ အစာအနေနဲ့ကတော့ အုတ်ဂျုံ(ကွေ့ကာအုတ်)၊ ယာဂု(ဆန်ပြုတ်) စားသုံးခြင်းဟာ သွေးကြောတွေ ထဲကို ဂလူးကိုစ့်ရောက်ရှိစေနိုင်ပါတယ်၊ ပရိုတင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ ကြက်ဥပြုတ်၊ ပေါင်မုန့် မီးကင်တွေကို ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးပေးပါ။ အရက်နာခဏခဏဖြစ်ခြင်းကတော့ ကောင်းသော လက္ခဏာတစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ရေရှည်မှာ အရက်စွဲစေနိုင်လို့ပါဘဲ။
တွေးတွေးဆဆ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သက်တန်းရှည်နေနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဖတ်ခဲ့သမျှစာပေစု ထဲကမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်၊ တစ်ချို့နေရာတွေ စာဖတ်သူသိရှိထားမှု့နဲ့ အယူအဆလွဲမှု့များရှိရင်လည်း ကျွန်တော်သည် သုတေသနပညာရှင်မဟုတ်ပါ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့ တိုလီမိုလီစာပေစုထဲကနေ အရက်သောက်တဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေတာမို့ ရွာစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာ နားထောင်းလိုက်ရတဲ့ စကားသံလေး တွေအဖြစ်သာ သဘောထားပေးကြပါလို့—-။
စာကြွင်း – ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ ရေမြေသနင်းကို လင့်ပေးပေမယ့်ဖွင့်မရသမို့ Renew ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါနော်။( http://myanmargazette.net/148138/health-fitness/food-drink )
ကျနော်က အမှန်ပြောရရင် တစ်လကို ရက် ၂၀ လောက် သောက်ဖြစ်နေတာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပါပြီ ၊
ဒါပေမယ့် မနက် နေ့လည် လုံးဝ အနံ့ကိုခံမရလို့ သောက်ဖို့ဝေးပေါ့ ၊
အခုတော့ ဒီမွေးနေ့ကျော်ကတည်းက အိမ်မှာပဲ လစ်မစ် ( ၄ – ၅ ပက် ) နဲ့သောက်ပါတယ် ၊
သမီးငယ် အလိုကျပါ ၊ သူကပဲ ပိုက်ဆံထုတ်ပေး သူကပဲ အမြည်းလုပ်ပေးပါတယ် ၊
ကျနော်က အပေါင်းအသင်းမင်တော့ ၈ နာရီ ၉ နာရီမှ အိမ်ပေါ်တက်တဲ့ရက်တွေ ရှိခဲ့ဘူးလို့ တဲ့ ၊
ပိတ်ရက်ဆိုရင်တော့ ဘော်ဒါတွေနဲ့သောက်ပါလို့ သမီးက အမိန့်ရှိသဗျ ၊
အိမ်မှာဆိုတော့ သောက်ပြီး စားတော့တာပဲလေ ၊
ရေရော ရေများများသောက်ပါတယ် ၊ ပျားရည်ဆောင်ထားဦးမယ် ၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကိုခ ရေ… တကယ်ကို မှတ်သားသင့်တာတွေ အများကြီးပါ…
စကားကို ကုန်အောင် မပြောလိုပေမယ့် အခုလက်ရှိ အရက် မသောက်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်… ဘီယာပြောင်းသောက်ပါတော့မယ်… ဒါတောင် မအောင့်နိုင်မှသာ သောက်တော့မှာပါ…
လင့် ရှယ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဗျာ…
၀င်ရောက်ကာ အားပေးကြကုန်သော တောင်ပေါ်သာနဲ့ ရေမြေသနင်း ကို ကျေးဇူးပါ။
ဒီပို့(စ) မှာ တညားရဲ့ ဘီယာနဲ့ အရက်ပို့(စ) လာ ကြော်ညာဝင်အူးမှပဲ
ဟုတ်.. တကူးတက ရှယ်ပေးလို့လဲ ကျေးဇူးပါ…
act y says:
အ သောက် ပျက် ရင်
အ သက် ပျောက် သ တဲ့
ဒါ ကြောင့် မို့ အသည်းအားဆေးလေးနဲ့ တွဲသောက်နေပါကြောင်း
ကျေးဇူး ပါကိုကြီးခင် ရေ…
မသိ သေးတာလေးတွေ လဲမှတ်သား သွားပါတယ်၊
ကျနော်လည်း အရက်ပြင်း သိပ်သောက်လို့မရ။
သုံး လေးပတ်ထပ် ပိုသောက်မိရင်
လက်နဲ့ ကျောပြင်မှာ ပေါ်လာတတ်လို့။
အခုနောက်ပိုင်း ဘီယာပဲ သောက်တော့တယ်။
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ရတာ အကျိုးများတယ်ဗျာ
.အလွန်အကျွံကတော့ ဘယ်အရာမှမကောင်းပါဘူးဗျာ…ကိုယ်တိုင်လည်း မလွန်မိအောင်ထိန်းနေရတယ်
အဲသလို ပြောကြေးဆို.. ဦးမိုက်ရေ… ကျွန်တော့် ဘိုင်နိမ်းနဲ့ ပို့စ်တင်ပေးတာဆိုတော့…. အွန်း….
မြန်မာပြည်ဖြစ်ဝိုင်တွေ.. ယူအက်စ်မှာ တွေ့ချင်သား…။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တွေပွင့်… လူတွေကျမ်းမာ.. မိန်းမတွေအသားအရေလှ..
တဂျီး ပြောကတည်းက တစ်ယောက်တည်း
ပိတ်ရက် ၂ ရက်
ဝိုင် အနီ တစ်လုံးနှုန်းနဲ့ သောက်နေတာ။
ဘာဝိုင်.. ဘယ်ဝိုင်က.. ဗမာစိတ်/ပါးစပ်နဲ့တည့်သလည်း.. ကိုက်သလည်း.. မှတ်တမ်းလုပ်ပေးလိုက်လေ…
ဝိုင် ဘရန်း ဆိုပြီး ….
ကူညီမယ် ဆိုတဲ့ လူဂျီး နဲ့ ရန်ဖြစ်ထားမိလို့။
သော်တာဆွေ အမြဲရေး တဲ့ အရက်သောက်တာ ဘယ်လိုကောင်းတာ၊
သူများကြက်ခိုး စားရတာ ဘယ်လို အရသာရှိတာ
အဲလို စာမျိုး ကလဲ လူ့မျိုးဆက် ကို လွှမ်းမိုးခဲ့နိုင်သလား။
စာရေးဆရာကြီး ကို အပြစ်တင်စာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခေါင်းထဲဝင်လာတာလေးမို့ ချရေးလိုက်တာ ပါ ကိုခ ရေ။
သူ့အကြိုက် သူ့အလိုက် နဲ့ သူပေါ့ဗျာ မြစပဲရိုးရေ။
စာရေးသူတွေဟာ သူဖိလင်နဲ့သူ သူဈာန်ဝင်ရာကို ရေးဖွဲတတ်ကြတာဘဲလေ။
သူဈာန်ဝင်ရာ ဖီလင်ဖြစ်ရာ အတွေးပေါက်ရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးပေါ့ဗျာ။
ရေးသူရှိလို့ ဖတ်နေဖြစ်တာလား၊ ဖတ်သူရှိလို့ ရေးနေဖြစ်တာလား ဆိုတာကတော့ မသဲကွဲတဲ့ အညမည သဘောတရားတွေမို့ ကြိုက်လျှင်ဖတ် မကြိုက်လျှင်ကျော်သွား(စာရွက်ဆို လွှင့်ပစ်လိုက်) လို့ဘဲပြောရပေမယ်ပေါ့လေ။
ဒီခေတ်မှာ.. War on Drugs တွေကို.. ယူအက်စ်အစိုးရက.. အရှုံးပေးလာပြီးသကာလ.. ဆေးခြောက်လည်း.. ဆေးဖက်ဝင်လာတယ်ဖြစ်လာနေသဗျ..။
ယူအက်စ်ရဲ့.. ပြည်နယ်၂ခု.. ကိုလိုရာဒိုနဲ့.. ၀ါရှင်တန်ပြည်နယ်မှာ.. ဆေးခြောက်.. တရားဝင်ဖြစ်နေပြီ..။
ဆရာဝန်တွေကတော့.. ဆေးခြောက်က.. တချို့ဝေသနာတွေသက်သာပျောက်ကင်းတယ်.. ဆိုတာပဲ..။
.အပေါ်မှာ သူကြီးက ဆေးခြောက်….. ဆိုလို့ …..
.တကယ်တော့ ဆေးခြောက်က ဆေးဝါး/ဆေးဖက်ဝင် အပင်တစ်မျိုးပဲလေ..
.လူတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးလို့တံဆိပ်တပ်လို့ နာမည်ပျက်သွားတာ..
.သူ့ဟာသူ တော်တော် အသုံးတည့်ပါတယ်။
.အိုဘားမားလဲ ငယ်ငယ်က ဆေးခြောက်သုံးဖူးပါတယ်။ အခု အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်နေပါပြီ။
.မပျက်စီးမယ့်လူက အလကားနေရင်း မပျက်စီးဘူး..
.ပျက်စီးမယ့်လူက ဘာမှမရှိရင် ကော်ရှုပြီးပျက်စီးတာပဲ ….
.ကျုပ်က မဲမဲမြင်ရင် မူးယစ်ဆေးဝါး အမည်တပ် အစွမ်းကုန်ပိတ်ပင်တာကို တော်တော်စက်ဆုပ်မုန်းတီးတယ်…
.ဘိန်းလို အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အနာအကျင်သက်သာတဲ့ဆေးမျိုးကို
.ဘိန်းစားတွေ လွယ်လွယ်ပေါပေါရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ပိတ်ပင်တော့
.ကင်ဆာရောဂါသည်လို ရုတ်တရက် ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသူတွေလို လူမျိုးတွေ (လူကောင်းတွေ)
.အပြင်းအထန်ဝေဒနာခံရပြီး အသေဆိုးနဲ့ သေရတာပေါ့….။
.(အထိန်းအကွပ်နဲ့ သုံးပါတယ်လို့ ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့…
.လောလောဆယ် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ မော်ဖင်းလိုအပ်ရင် ရနိုင်မရနိုင် ဖြေကြည့်ပါ…။)
.တခြားမပြောနဲ့ ချောင်းဆိုးရင်ကို အင်မတန်စွမ်းတဲ့ ချောင်းဆိုးဆေးတွေကို ဘိန်းပါလို့ဆိုပြီးပိတ်တော့
.ကျုပ်တို့မှာ ချောင်းတစ်ခါဆိုးရင် တစ်လနဲ့မပျောက်ဘူး…..။
.လူကောင်းတွေက သက်သက် ဓါးစာခံဖြစ်ရတယ်လို့ …….
.အိုဘယ့် ….. လောက ….
ပြန်ရှာပေးလိုက်ပါတယ် လေးခ ရေ
သဂျီး လင့်တွေကို အပြောင်းအလဲ လုပ်ရာမှာ နောက်က ပိုသမျှတွေ ဖြုတ်ပစ်တာမို့ ရှာမရ ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ပါကြောင်း